युगसम्बाद साप्ताहिक - मुलुकको सवैपक्ष तहस नहसको दिशातिर - यादब देवकोटा
Thursday, 04.09.2020, 06:58pm (GMT+5.5) Home Contact
मुलुकको सवैपक्ष तहस नहसको दिशातिर - यादब देवकोटा
Tuesday, 11.13.2012, 05:24pm (GMT+5.5)
अबको दुई दिनभित्र मुलुकले बजेट पाउनुपर्ने हुन्छ । तर त्यो जिम्मेवारी नेताहरूले पूरा गर्लान् भन्ने पटक्कै संकेत छैन । बजेटकै विषयलाई लिएर सत्ता स्वार्थको खेल उत्कर्षमा पुगेको छ र विपक्षीहरूले सरकार बिरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् । सहमतीय राजनीतिको संस्कार बस्न नसकेका कारण यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो । राष्ट्रको आवश्यकताभन्दा व्यक्तिको स्वार्थ हावी भएकाले विगत पाँच वर्षदेखि मुलुक यसै गरी अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । निकासको नाममा दलीय स्वार्थले मात्र प्राथमिकता पाइरहेको छ । मुलुकप्रति जिम्मेवार नहुँदा ऐतिहासिक संविधानसभा संविधान बनाउनै नसकी विघटन भयो । यो नेपाली जनताको घोर अपमान हो तर नेताहरू अझै जनताको अभिमत र आकांक्षा भन्दै आफ्नै मात्र स्वार्थको बोली बोलिरहेका छन् । मुलुकको राजनीतिमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको प्रचूर अभाव छ ।
मुलुकको समग्र क्षेत्र तहसनहस हुने अवस्थामा छ । राजनीतिमा भित्रिएको विकृति र विसंगतिको जालोले सिंगो नेपाली समाज विकृत मनस्थितिमा छ । राजनीतिका खेलाडीहरूमा अलिकति पनि नैतिकताको संकेत पाइएन । आफ्ना अनुकूलका सवै ठीक र प्रतिकुलका सवै वेठीक भन्ने गलत संस्कारले यतिसारो जरो गाडेको छ कि त्यसको वर्णन गरेरै सकिन्न । राजनीतिकदेखि लिएर प्राकृतिक वातावरण समेत यतिबेला विकृतिको शिकार भैरहेको छ । यसले धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक हरेक क्षेत्रमा विकार पैदा गरिरहेको छ । यो विकारले मुलुकको भविष्य नै अन्योग्रस्त बन्दै गएको छ । हामीले भावी पुस्तालाई नयाँ नेपाल हस्तान्तरण गर्ने कि बाजेको पालाको नेपाल समेत दिन नसक्ने हो भन्ने चिन्ता जागृत हुन थालेको छ । पिता पुर्खाले रगत पसिना बगाएर एकीकृत गरेको नेपाललाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन गर्ने अनेक षड्यन्त्रमूलक कार्यहरू भैरहेका छन् । जनताको नाममा अरुकै स्वार्थको पक्षपोषण गर्ने क्रियाकलापहरू समेत देखिएका छन् । सत्ता र शक्तिका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी आइरहेको छ । नैतिकता, निष्ठा र सैद्धान्तिक प्रतिवद्धताको कुनै मूल्य छैन । राजनीति त मूल्य–मान्यता र निष्ठा–नैतिकता अनि सैद्धान्तिक आधारमा चल्नुपर्नेमा कसैको लहडमा चलिरहेको छ । के हामीले भावी पुस्तालाई यस्तै लहडको राजनीति हस्तान्तरण गर्ने हो ?
इतिहास बिर्सेर क्षणिक स्वार्थको पछि दौडिदाको परिणाम मुलुकले भोगिरहेको छ । राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा लगाउनै नहुने नारा घन्काइए । जनआन्दोलनले उठाउँदै नउठाएको विषयहरू विदेशीको इशारामा घोषणा गरियो । त्यही नै सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो । विगतलाई निषेध गर्ने नाममा मुलुकका संरचना ध्वस्त पार्ने अभियानको नतिजा अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ । नेताहरूकै लागि पनि ती विषय ठूलो समस्याका रुपमा उपस्थित भएका छन् । उनीहरू न अगाडि बढ्न सक्छन् न पछाडि नै हट्न सक्छन् । अहिलेको समस्या भनेको यही हो । के गर्दा मुलुकको दीर्घकालीन हित हुन्छ भन्ने पटक्कै ख्याल नगर्दा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो । नयाँ नेपालको नाममा नेपालको सद्भावपूर्ण सामाजिक बनोटलाई छिन्नभिन्न पार्दा अहिले मुलुकको राष्ट्रिय एकता र अखण्डता नै खतरामा परेको छ । पृथकतावादी गतिविधिहरू चलिरहेका छन् । जब जब संविधान निर्माणको कुरा आउँछ त्यस्ता समूहहरू सल्बलाउँदै सडक तताउने गरेका छन् । यो सब इतिहासको स्मरण नगर्दाको परिणाम हो । बहुभाषिक, बहुजातीय, बहस सांस्कृतिक मुलुक नेपाल कसरी एक ढिक्का भएर रहेको थियो भन्ने ख्याल नगर्दाको परिणाम हो ।
अहिलेको राजनीतिक दलका नेताहरूले भनेजस्तै विगतमा सबै नराम्रा काम मात्र भएका थिएनन् । हाम्रा बाबु बाजेले हाम्रा लागि पक्कै पनि केही न केही राम्रा कुरा छाडेर गएका थिए । हामीले त्यसको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न नपाए पनि त्यसको प्रभाव भने अनुभूत गरिरहेकै हुन्छौं । समाज विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणीय शुद्धता, धार्मिक–सांस्कृतिक गतिविधि लगायत अनेक पक्षहरू पुख्र्यौली हस्तान्तरण हुँदै आएका छन् । यी कुराहरू कति राम्रा थिए र छन् भने कतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । यो समयक्रमसंगै परिस्कृत हुँदैजाने विषय हुन् । हिजोका कुराहरू आज जस्ताको तस्तै भित्र्याउनुपर्छ भन्ने पनि होइन तर समयको माग भन्दैमा राम्रा कुराहरूलाई भताभुंग पार्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । समानताको नाममा अनेक नाराहरू भट्याइएका छन् । सहिष्णु समाजलाई भताभुङ्ग पारेर आपसी द्वेषको विष घोलिएको छ । जातीय, धार्मिक, सामाजिक, भाषिक र सांस्कृतिक सद्भावमाथि धावा बोलेर अनेक विकृति घुसाइएको छ । विश्वमै अद्भूत नमूनाको रुपमा रहेको नेपाल त्यस्तै अद्भूत विकृतिको जालोले बेरिंदै गएको छ । हिमाल पहाड र तराई गरी विविधतामा बाँडिएको नेपालमा यी तीनै प्रदेशको आ–आफ्नै महत्व र गरिमा छ । अहिले यसैको नाममा राजनीति चलिहेको छ । केही टाठाबाठाहरू आफ्नो हैकम स्थापित गर्न जनताका हातमा हतियार थमाइरहेका छन् । आपसको सद्भाव घृणामा परिणत भएको छ । के हामीले भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने धार्मिक–सामाजिक मूल्य मान्यता यस्तै हो ?
प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधताको धनी नेपाल यतिबेला अपूर्व प्राकृतिक संकटको भूमरीमा छ । यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनले विश्वलाई नै आकर्षित गर्दछ । कतिपय कुराहरूमा आधा विश्वको प्रतिनिधित्व नेपाल एक्लैले गर्दछ भनेर विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वमा जति प्रजातिका चरा छन्, त्यसको ३६ प्रतिशत नेपालमै रहेको बताइन्छ । हाम्रा नीति निर्माताहरूमा पर्यावरणीय शुद्धताप्रति कुनै चासो छैन । प्राकृतिक स्रोत साधनको अनावश्यक र बेढङ्गी उपयोगले निम्तिनसक्ने विपत्तिको उनीहरूले ख्यालै गरेका छैनन् । राजधानी उपत्यका मात्र होइन आज पहाडी जिल्लाका डाँडाकाडा भत्किने क्रममा छन् । व्यापारको नाममा पहाड खनेर त्यहाँबाट ढुङ्गा–माटोको विक्री भैरहेको छ । तराईको रक्षा कवच मानिने चुरे विनाशको क्रम रोकिएको छैन । राजनीतिक पहुँच हुनेहरूले अहिले पनि सो क्षेत्रमा खानी चलाइरहेका छन् । केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि मुलुकको भविष्य नै संकटमा पार्ने काम भैरहेको छ । केही रकमको लोभमा मुलुकलाई नै तहसनहस पार्ने काम भैरहेका छन् । नीति निर्माताहरूले प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्नेतिर खासै ध्यान दिएका छैनन् । वनजंगल उजाड हुँदैछन् । पहाडहरू चर्किने र भत्किने खतरा औंल्याउन थालिएको छ । राजधानीकै शिवपुरी, नागार्जुन, पुल्चोकी लगायतका पहाडहरू भासिने खतरा बढेको छ । यसको एउटै कारण भनेको उपत्यकामा बढ्दै गएको अव्यवस्थित शहरीकरण हो । शहरीकरण र वस्ती विकासका नाममा सानातिना डाँडा र थुम्काहरूमा डोजर कुदाउने गरिएको छ । उर्बर भूमि मानिएको उपत्यका यतिबेला घरैघर मात्र उम्रिरहेका छन् । यहाँको हरियाली, पानीका स्रोत र सौन्दर्यका प्रतिमूर्ति वरिपरीका पहाडहरू जोखिममा परिरहेका छन् । हिजो बाबु बाजेले हामीलाई हस्तान्तरण गरेको धारा, पोखरी र स्वच्छ नदीको ठाउँमा हामीले भोलिका पुस्तालाई के हस्तान्तरण गर्दैछौं ? खोई कसैले चिन्ता र चासो देखाएको ? नदी भनेको ढल निकासको बाटो र पहाड भनेको उजाड पहिरो गएको तारेभीर मात्रै हामीले भावि पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने हो ?
अहिले विश्वकै सर्वाधिक ठूलो समस्या र चासो भनेको वातावरण विनाश हो । वातावरण शुद्ध राख्नुपर्छ, जंगल मास्नु हुँदैन, नदीमा फोहर मिल्काउनु हुँदैन, धारा, कुवा, कुलो तथा पोखरीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हिजोका पुरातनवादी भनिने पुर्खाले बाटो देखाए । आजका शिक्षित भनिनेहरू त्यसलाई ध्वस्त पार्दैछन् । हिजो धार्मिक मूल्य मान्यतामा समाज अडेको र चलेको थियो । त्यसैले ती कुराहरू जोगिए । धारो–कुलोमा छेकथुन गर्नु हुन्न, नदी किनारमा बस्ती बसाउनु हुन्न, डाँडा, थुम्का र पहाडको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । उपत्यकामा मात्र ४ सयभन्दा बढी ढुङ्गे धारा र ३ सयभन्दा बढी पोखरी थिए भनिन्छ । तर अहिले तिनीहरूको अस्तित्व लोप भैसकेको छ । नाम मात्रका सुख्खा ढुंगेधारा र केही पोखरी मात्र बाँकी छन् । पानीका स्रोत मासिंदैछ ।
आफ्ना वरिपरि भएको स्रोतको आफ्नो परम्परा अनुसार संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने हो भने हामीलाई कुनै संकट पर्दैन । तर आफ्नो स्रोतको उपयोग र संरक्षण गर्न नसक्ने अनि अरुतिर आँखा दौडाउने काम हामीबाट भैरहेको छ । यो विकासे नीति होइन– यो त केही मुठ्ठीभरका व्यक्तिको स्वार्थका लागि रचिएको षड्यन्त्र हो भन्नेहरू पनि थुप्रै छन् । उपत्यकाको भूमिगत जलको सतह ४ मिटरभन्दा तल झरेको दावी विज्ञहरूले गरेका छन् । यसै गरी पानीको सतह घट्दै जाने हो भने उपत्यका भासिने खतरा समेत औंल्याइएको छ । यसको एउटै कारण भनेको अव्यवस्थित शहरी विकास हो । नदी अतिक्रमण, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, वन जंगल तथा साना डाडाहरू मासिनु यसका कारण हुन् । भूमिगत पानीको सतह घट्नुको कारण जमिनले पानी सोस्न नसक्नु हो र यसको कारण अव्यवस्थित विकास नै हो ।
आफूले राम्रो काम गर्न नसके पनि विगतका राम्रा पक्षहरूको आलोचना गर्ने र तिनको ध्वंश गर्ने कार्य नगरिएको भए अहिले मुलुकको अवस्था यस्तो हुने थिएन । राजनीतिदेखि समाज व्यवस्थाका हरेक पक्षमा विगतको राम्रो पक्षलाई लत्याउँदा अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो । सबै नीतिहरूलाई निर्देशन गर्ने राजनीतिमा घुसेको यो विकारले मुलुकको समग्र पक्ष तहसनहसको दिशातिर अग्रसर छ । यो सबै राजनीतिक संस्कारहिताता र विकृति मानसिकताको उपज हो ।
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (१) - तारानाथ सुवेदी (09.24.2012)
सन्दर्भ राष्ट्रिय बाल दिवस २०६९ : घोषणा हैन, समस्याको गहिराइमा पुग्नुपर्छ - यादब देवकोटा (09.18.2012)
आगे तपाईंको मर्जी त छँदैछ प्रधानमन्त्री जी ! - महेश्वर शर्मा (09.18.2012)
डा. भट्टराईको सरकार : अतिवादको शिकार - तारा सुवेदी (09.18.2012)